दिउँसो ३ बजे देखि साँझ ६ बजेको बीचमा जन्मिएकाहरु कति भाग्यमानी ? हेर्नुहोस् ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दिउँसो ३ बजे देखि साँझ ६ बजेको बीचमा जन्मिएकाहरु कति भाग्यमानी ? हेर्नुहोस् !
दिउँसो ३ बजे देखि साँझ ६ बजेको बीचमा जन्मिएकाहरु कति भाग्यमानी ? हेर्नुहोस् !
दिनको चौंथो प्रहर
दिनको चौंथो तथा अन्तिम प्रहरलाई सायंकाल भनिन्छ । दिउसो ३ देखि साँझ ६ बजे बिचको समयलाई सायंकाल भनिन्छ। यो प्रहार सात्विक हो तर यसमा तामोगुना गुणको प्राथमिकता हुन्छ । मानिन्छ कि यस समयमा जन्मेका व्यक्तिहरू कला, संगीत, चलचित्र, सञ्चार , ग्लैमर जस्ता क्षेत्रमा रुचि राख्छन् । यो पनि मानिन्छ छ कि यस समयमा जन्मेका व्यक्तिहरूको प्रेम विवाह हुने सम्भावना हुन्छ ।
यो प्रहार सात्विक हो तर यसमा तामोगुना गुणको प्राथमिकता हुन्छ । तपाईं यस प्रहरमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ तर केहि भोजन भने गर्नु हुँदैन र कुनै नयाँ काम सुरु गर्न नहुने बताइएको छ । यस समयमा, यदि कुनै पनि विरुवालाई नियमित रूपमा पानी दियो भने, आमा – बुबाको आफ्ना बच्चाहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने विश्वास छ ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन २१, २०७६१४:२५
राति ९ बजे देखि मध्यरातको बीचमा जन्मिएकाहरु हुन्छन् यति भाग्यमानी !
कोरोना बढेपछि फेरि ४५ दिन सम्म लकडाउन थपियो